Ajụjụ | Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd.
Igwe nju oyi / oku
Azụmaahịa Ikuku Na-Achịkwa-Ọkpụkpụ Series
Obere Cool-Bee Ikpo Nri
Ọkachamara Ọdụ ikuku 4 na 1
Ọkachamara Igwe Ọdụ ikuku 5 na 1
Ọkachamara Multi Tower Air 4 na 1
Oghere Igwe ikuku
Young Guy Personal Ikuku igwe nju oyi
Onye nkuzi okirikiri
Obere onye ofufe
Onye ofufe ụlọ elu
Ebe a na-asa ahụ
Ahụ Sensor Heater
Ebe a na-ere ọkụ
Ogwuregwu na Humidifier
Helọ Igwe Ngw'ọkụ
Ulo elu ulo elu ụlọ elu
Ulo elu ya na Eco Heater
Aterlọ Ime ụlọ dum
Ntinye ụlọ ọrụ
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị asaa. Maka usoro mmepụta, oge a na-eduga bụ ụbọchị 20-30 ka ị nwetasịrị nkwụnye ego. Oge mbu ga-adị mma ma (1) anyị enwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndị ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ na usoro iheomume gị, biko jiri ire gị na-ere ihe ị chọrọ. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. N'ọnọdụ ka ukwuu, anyị na-enwe ike ime ya.
Anyị na-akwado akwụkwọ maka ọrụ na ọrụ aka anyị. Anyị nkwa anyị ka afọ ojuju nke ngwaahịa anyị. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị ilebara ma dozie nsogbu ndị ahịa maka afọ ojuju onye ọ bụla
You na-ekwe nkwa mbuputa ngwaahịa n’udo na echekwa?
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Anyị na-ejikwa mbukota ihe egwu pụrụ iche maka ngwongwo ndị dị ize ndụ na ndị na-ebu mmiri nchekwa oyi nwere nkwado maka ihe ndị na-emetụta okpomọkụ. Nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na igwe anaghị eburu ọkọlọtọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Ọnụ ego mbufe na-adabere n'ụdị ị họọrọ iji nweta ngwongwo. Express na-abụkarị ndị kacha ọsọ ọsọ mana ọ kachasị ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Gharịrị ọnụ ahịa enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa ego, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ozi.
Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd na-ejikọ R & D, imepụta, ire na ọrụ, ka ọ dị ugbu a ịgbadoro onwe ya na ntuziaka nke mkpa ndị ahịa.
Ekwentị: + 86-755-84150793
© Copyright - 2010-2020: Ikike niile echekwabara.